Methyl Sulfonyl Methane (MSM), MSM Supplements
Pharm အစားအစာအဆင့် MSM
Feed MSM အဆင့်
Dimethyl Sulfoxide(DMSO) အရည်
Zhuzhou Hansen Chemicals Co. , Ltd
လိပ်စာ: Xinma စက်မှုဇုန်, Tianyuan ခရိုင်, Zhuzhou 412000, တရုတ်
﻿ Pharmaceutical grade MSM Methylsulfonylmethane Feature The raw material is synthesized from high purity dimethyl sulfoxide(99.9%). ခွဲထုတ်ခြင်းနှင့်ခြောက်သွေ့ပြီးနောက်သန့်စင်သောရေတွင် crystal နှင့် recrystallization အားဖြင့်ရရှိခဲ့သည်, အားသာချက်မှာမြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းဖြစ်သည်, အနက်ရောင်အစက်အပြောက်မရှိပါ, အနံ့ဆိုးမရှိပါ. အရောင်ကပိုပြီးအဖြူနှင့်သဘာဝဖြစ်ပါတယ်,…
Cosmetic Grade MSM Methylsulfonylmethane Feature The raw material is synthesized from high purity dimethyl sulfoxide (99.9%),ခွဲထုတ်ခြင်းနှင့်ခြောက်သွေ့ပြီးနောက်သန့်စင်သောရေ၌ crystal နှင့် re-crystal ဖြင့်ရရှိသော, အားသာချက်မှာမြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းဖြစ်သည်, အနက်ရောင်အစက်အပြောက်မရှိပါ, အနံ့ဆိုးမရှိပါ, အရောင်ကပိုပြီးအဖြူနှင့်သဘာဝဖြစ်ပါတယ်, ကောင်းသောငွေဖြစ်လွယ် !…
Feed Grade MSM Methylsulfonylmethane Feature The raw material is synthesized from high purity dimethyl sulfoxide (99.9%),ခွဲထုတ်ခြင်းနှင့်ခြောက်သွေ့ပြီးနောက်သန့်စင်သောရေ၌ crystal နှင့် re-crystal ဖြင့်ရရှိသော, အားသာချက်မှာမြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းဖြစ်သည်, အနက်ရောင်အစက်အပြောက်မရှိပါ, အနံ့ဆိုးမရှိပါ, အရောင်ကပိုပြီးအဖြူနှင့်သဘာဝဖြစ်ပါတယ်, good liquidity…
Industrial Grade MSM Methylsulfonylmethane Feature The raw material is synthesized from high purity dimethyl sulfoxide(99.9%),ခွဲထုတ်ခြင်းနှင့်ခြောက်သွေ့ပြီးနောက်သန့်စင်သောရေ၌ crystal နှင့် re-crystal ဖြင့်ရရှိသော, အားသာချက်မှာမြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းဖြစ်သည်, အနက်ရောင်အစက်အပြောက်မရှိပါ, အနံ့ဆိုးမရှိပါ, အရောင်ကပိုပြီးအဖြူနှင့်သဘာဝဖြစ်ပါတယ်, ကောင်းသောငွေဖြစ်လွယ် ! Low…
Zhuzhou Hansen Chemicals Co. , Ltd © 2020 မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး သင်္ဘောပေါ်လစီပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းဆိုင်ရာမူဝါဒကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ